Izindaba - Khetha uhlelo oluncane lwe-Irrigation, ugcine wonke amathonsi amanzi!
Khetha uhlelo lwe-Micro Irrigation, gcina yonke imvula yamanzi!
Kusukela kuqale lo nyaka, amazwe amaningi athengisa imikhiqizo yezolimo emhlabeni wonke abhekene nenkinga yesomiso, okube nomthelela omkhulu emnothweni womhlaba.
Isibonelo, i-United States neBrazil babhekane nesomiso esibi. Ukolweni, ummbila, nobhontshisi bahlupheke ngesomiso, okwenze amanani entengo okudla omhlaba abi kakhulu. Ngaphezu kwalokho, izingxenye zeRussia neCanada nazo zihlushwa ukushisa okuphezulu nesomiso. Amazwe amaningana abalulekile okukhiqiza okusanhlamvu namazwe athumela okusanhlamvu abhekene nenkinga enkulu yesomiso.
Lokhu kudinga okufanelekile ngokwengeziwe ukuchelela izindlela nokuningi ukunisela okuqondile izindlela, ezingakhiqiza ukudla okuningi ngamanzi amancane.
Ngokwezibalo, izikhukhula zendabuko ukuchelelakudinga amanzi angama-60-80 m for ngehektare lomhlaba, ukunisela ngenkasa kudinga ama-40-50 m³, futhi ukuchelela ngenkasa kudinga kuphela ama-25-30 m³. Izinzuzo zokonga amanzi zisobala impela!
Ezindaweni zokushisa ezomile neziphezulu, cabanga nokusetshenziswa kokunisela ngenkasa ngaphansi komhlaba (okunganciphisa kakhulu ukulahleka kokuhwamuka, amanzi nomanyolo kuhanjiswa ngqo kuya ezimpandeni, ngokusebenza kahle okuphezulu; ingalawula kahle ukukhula kokhula, inciphise inani we-herbicides, futhi ube nobungani bemvelo; Umphumela wokusebenzisa ukuchelela ukuchelela ngomshoshaphansi ngaphansi kwezinga lokushisa eliphezulu nendawo yesomiso muhle kakhulu).
Ngisho nasezindaweni ezinemvula eyanele, usengakhetha ukuchelela okunembile noma uhlelo lokunisela oluncane. Ukunisela ngokunemba akulula nje njengokonga amanzi, kunezinzuzo eziningi, njenge: